Kusvira vakadzi ku UK part 3 – VanodaZvinhu
Kusvira vakadzi ku UK part 3
by DrSviro · April 17, 2014
Continuation from part 2
wavhurirwa makumbo nechakdai iwe woita 2mins hwejongwe, mangwana hauzopiwi futi, bonyora first to get away with the excitement
Nguva yakafamba tichingoita zvedu izvozvo, ko ndaimbozvifunga here kuti vakadzi vediaspora havana bas nezvizhinji as long as as they get mboro they are happy. Kubasa kwedu kwakaita training yemasenior care meaning Sidell and Anna had to attend. Ndakasvika kumba wanike Shingi haasati aenda kucollege, ndomubvunza zvikanzi kune teacher workshop jani jani. Ndakati today was my chance chete, all that fantasizing was coming to a reality today. Ndakanogeza iye ndokugadzira breakfast, and I was thinking ndoitanga sei nyaya, Ndapedza kugeza ndakangopfeka kashort ndouenda kukitchen kwaaiva abika tikatanga kudya, ini ndakangoti nyobvo nyobvo ndibva ndati ndaguta.
Apa mazichest ari panze, “nhai Shingi musi uya wakonei”, ndakadaro zvangu ndakuda kutanga nyaya yangu,
“musi upi?” akabvunza achinyaririra,
akamboti zii zvikanzi,”zvese zvamaiita”
“saka unotii nazvo?” ndakadaro
“a hapana handisi hakasi kekutanga kukuonai”
“watii kudii?” ndakabva ndasimuka
“ehe hakasi kekutanga kukuonai” akadaro achiisa ndiro musink
“saka wakambozviita here?” ndakanga ndswedera kwaari apa mudhara akumira zvake
“handisati ini, ndakangonzwa shamwari dzangu dzekuchikoro dzichiti zvinrwadza only first time, but mhai vanogara vachichema why?” akanga zvino azembera pasink anditarisa
Mwana uyu ane chivindi nhai kushinga kutaura nyaya yakadaro neni tiri toga, but handisi baba vake ka ini so hapana problem apa. Ndakamubata ruoko iye kwakurubvisa achiti, “moda kuitei”
“ndodakuti uone sei mai vako vachichema hakusi kurwadziwa kwete”
“chii chandinoona ipapa mundikuvadze zvangu”
ndakaona kuti kutaura uku ndekwemunhu aida kusvirwa asi achida kunyengererwa, so ndakati regai ndinyengere tione.
Ndakatanga kutamba chikudo naye tikatanga kutandanisana mumba, ndamubata asvika pasofa bvandatanga kubata mazamu, wanike zii, ndini ruoko muT-shirt ah zii ponongo bra, zii, bva ndasimudza T-shirt kwakuyamwa mazamu mwana ndokudonhera pasofa. Ini kwakuto bvisa T-shirt yake ndikararmba ndichiyamwa mazamu akanga zvino amira uye kumererera, Ndakadzikisa ruoko mubhurukwa ndiona ndobatwa richibviswa,, ini muromo pane wake kwakutsvoda, akamover achizvigadzirisa position, bvandsimudza skirt. Zvandakaona zvakaita kuti ndiite mweya weubinya chaiwo, gumbo rake so hai hai hai kuumbana her ikoko. plus kutsvuka, kuzoti chivakashure, iii hamheno. Ndakabata kabhurukwa ndiye kwachu, “manje mabvabhurura pant yangu,” ini kana kumbozvizwa. Ndapuruzira gambi ndikanzwa pane sango wena, ko zvekugera aizvizivirepi ipo pasati pambopindwa.
Ndaona mwan oita weak, kwakumusimudza kuenda naye upstairs kubedroom kwake, iye akanga atoota zvake, kumuradzika pane mubhedha wake akangoti rabada. Ndakabvisa skirt yake akasara ave musvo apa ini ndichiri kupfeka ka short, zvikanzi, “vhara door”, ko kwakungosairira ka, ini katanu zvose, mudhara mbi uko, mwana kuti ba kushama, ndakamuvhura makumbo ndoisa chigunwe, mwana aka chema zviaknzi zviri kurwadza ndikati pora ndoita zvishoma zvishoma, ndakakoira nechigunwe mwana akanakirwa zvekutitunda, akafunga kuti ndatoisa zvikanzi, “manje naane nhumbu” apa handisati ndaisa.
Ndakanyatsomuvhura makumbo kwanangidza mboro pabeche rine chiya chakazara mvura, ndaisa musoro chete ndikanzwa kuoma kupinda, iye akuti zviri kurwadza. Ndakamubata makumbo nechekumagaro uku kuitira kuti asazonzvengese, mudhara zvino akanga ofemera pamusoro, ndakaona kti ndiakita zvekunyengerera ka haipinde, ndiye nesimba rangu rose shwete, ndakanzwa bvaru, svedzu, mhere kurumwa nekupisa kweropa, Apa ndakanga ndapinda wena ndobva ndanzi nga pashoulder, apa irimo chete, ndikati handimoiburitse, akachemema akademba achiedza kuda kuibudisa asi ndakanga ndakabata chete, ndakabva ndatanga kukoira, zvinyoro nyoro iye akatanga kuzhongonyoka, zhongonyoka achiedza kuibudisa.
Ndakaramba ndikoira kusvika yapinda yose, iye kwakundirega abva atambarara nekukanda maoko uko, ndichnyarova mbutu, akagwinha gwinha ndobva atunda zve ini ndobva ndamboti koi koi a ndichinwza mboro yakashinywa nebeche zvakoma kudaro plus kakupisa keropa rehumhandara, ndakabva ndangotunda, Pakutunda ndakawedzera kupinda nekukoira iye akatanga zve kutunda apa akunyochema kubudisa misodzi chaiyo. Ndapedza kutunda ndazvomora ndikaona mboro riri ropa rega rega iyewo akazara ropa rine huronyo. Ndakazopinda basa kumunyararidza apa mheche yazvimba, kana kunda kutoilet ndakato mubatsira kufamba. Ndakazogeza futi ndonyemwerea kuti ndakanaga ndamubvarura ende she enjoyed iti big time. Kana kubasa musi uyu handina kuzoenda, iye kwakuudza mai vake ari kurwara nemudumbu.
Chakanga chasara kuti ndombomurova nekumashure kuti ainzwe ichisvika kuguvhu chaiko……………….
Ndakakagadzirira size inotenga pano paMzansi
by DrSviro · Published January 21, 2016
by DrSviro · Published July 17, 2015
Kusvira musikana webasa madam vaenda kumusha
by DrSviro · Published April 17, 2014
Next story Kukwira zigadzi zidhafu
Previous story Kusvira vakadzi ku UK part 2